“Sidaas si la mid ah, waxa qarsoon meeqaamka kubadda cagta ay ka joogto Somaliland. Xul qaran oo aan rasmi ahayn ayaa ka ciyaaray CONIFA (Xidhiidhka kubadda cagta dalalka aan la ictiraafsanayn), laakiin waxay ciyaartooyo ka helaan qurba-joogta xoogga iyo tirada badan ee halka milyan gaadhaya ee ku sugan dalalka sida UK, US iyo Scandinavian-ka”.
Dhowaanta, gobolku (Somaliland) waxa tirada dadkoodu le’ekaaday Uruguay, waxaana lagu qiyaasay 3.5 milyan oo aanay dhallinyaradeedu haysanin kaabeyaashii kubadda cagta, laakiin taas waxa ku hawlan inay wax ka qabato Kulliyadda Kubadda cagta Somaliland oo xarunteedu tahay Hargeysa, balse afarta qof ee aasaasay ay dalka oo dhan safar ku tagaan iyagoo waxbaraya 132 tababare, soona ururiyey 1,600 ciyaartoy.
“Marka aad joogto Boqortooyada Britain, wax walba way diyaarsan yihiin, kaliya waa inaad bixiso casharro tababarenimo, laakiin halkan waxaad ka bilaabaysaa eber.”
“Mar waxaanu haynay 140 carruur ah oo aanu garoonka ugu qaybinaynay toddoba iyo toddoba. Maalin ayaad soo kaxaynaysaa ilmo yar, toddobaadka xiga lix saaxiibaddii ah ayuu keenayaa, kaddib waxay soo kaxaysanayaan 20 saaxiib, horena waxaanu u ogeyn inay jiraan boqollaal carruur yaryar ah oo doonaya inay ciyaaraan.” Sidaas waxa yidhi Ali.
Adan oo Somaliland tegay July 2017 wuxuu sameeyey kulliyadda All Star Sports Academy, oo ka mid ah toddobada xarumood ee hoos yimaadda Kulliyadda Kubadda Cagta Somaliland (Somaliland Football Academy).
“Waddanku wuu jecel yahay kubadda cagta. Koox ayaad u sheegaysaa, kaddibna waxay kuu sheegayaan ciyaartoy kasta oo kooxdaas ka tirsan.” Sidaa waxa yidhi Adan oo sidoo kale ah macallin qaabeeya, soona bandhiga barnaamijiyo jimicsiga jidhka ah.
“Magaalada oo dhan ayaan lug ku wareegay, waxaanad arkaysaa carruur koorneyaasha dariiqyada ku ciyaaraya oo laagaya caagado ama sharaabaado sida kubadda loo duuduubay.” ayuu ku daray.
Kulliyaddu caawimo yar ayay ka heshay kooxda kubadda cagta West Brom, waana qalab tababar iyo adeegga caafimaadka deg degga ah, laakiin da’yarta Somaliland waxay weyn bay u tahay inay xidhaan, sannadkii horena waxay ku lebbisteen shaadhadhka Port Vale iyo Walsall.
….. Qaybta labaad ee warbixinta, waxaanu baahin doonaa gellinka hore ee maalinta barri ee Jimcaha ah insha Allah.